Thailand's finance minister: Hurumende haazorambi kurambidza cryptocurrency wokutengesera - Blockchain News
Thailand kuti mari gurukota: Hurumende haazorambi kurambidza cryptocurrency wokutengesera
The Thai hurumende haazorambi irambidze cryptocurrency wokutengesera, anoti rezvemari Apisak Tantivorawong, asi pamutemo framework kuti chibate digitaalinen dzeEurope vachaitwa zvimwe pachena mukati mwedzi.
Pashure pokukurukurwa ichangopfuura, chokuita masangano vakabvumirana kuti regulators havagoni kumisa kushandiswa chaivo dzeEurope asi achava waidzora uye kuzvidzora navo zvakanaka nenzira, Mr Apisak pana zuro wacho “Thailand yasimuka 2018” Chidzidzo ichi maiva ne Post Today.
The Reserve Bank, SEC, Finance hwoUmambo uye Anti-Money laundering Office (Amlo) vakatenderana akamisa kushanda remadziro tasked pamwe kufunga zvinogona matanho waidzora digitaalinen dzeEurope.
A panobva panguva rezvemari vati kushanda Panel nokukurumidza pasi munhu pamutemo yemibvunzo digitaalinen mari.
Yokudzora cryptocurrencies kumutsa zvinetso nokuti hapana tenderano aripo yakanakisisa pamutemo tsika, kunobva akati.
anorichengeta anonzi, munhu Japanese B ...
Previous Post:Russian yenyukireya masayendisiti zvasungirwa kushandisa supercomputers kuti cryptocurrency yangu
Next Post:Japanese crypto vanoita aigona utarisane 55% mutero pamusoro Purofiti